२०७७ कार्तीक ८ गते , शनिवार प्रकाशित
पृथ्वी र चन्द्रमाको उमेर अहिलेसम्म जति मानिदै आएको थियो त्यो भन्दा धेरै बढी रहेका कुरा हालै प्रकाशमा आएको छ । फ्रान्सको नेन्सी स्थित यूनिभर्सिटी अफ लोराइनको पछिल्लो ताजा अध्ययनले यो कुराको दाबी गरेको ।अनुसन्धानकर्ताहरुले के पत्ता लगाएको कुरा प्रकाशमा आएको छ भने सौर्य मण्डलको निर्माण शुरु हुनुभन्दा करीब ४ करोड बर्ष पछि नै प्रारम्भिक पृथ्वी तथा अर्को ग्रहको आकार भएको एउटा पीण्डका बीच टक्कभर भयो । त्यसैबाट चन्द्रमा जन्मियो । अहिलेसम्म के मानिदै आएको थियो भने यो टक्कर सौर्य मण्डल निर्माणको १० करोड बर्ष पछि भएको हो । स्पष्ट छ, अहिलेसम्मको अनुमान भन्दा पृथ्वी ६ करोड बर्ष पुरानो छ ।
पृथ्वी मात्रै होइन, चन्द्रमा पनि । किनभने यसै टक्करबाट चन्द्रमाको पनि उत्पत्ति भएको कुरा भनिदैछ । साइन्स पत्रिकामा २०१४ को जुनको दोश्रो सातामा प्रकाशित एक अनुसन्धनले यो कुरा पुनः दोहो¥याएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरुका अनदुसार पृथ्वी वास्तवमा ‘थिया’ नामको ग्रहसँग ठोक्किएको थियो जसबाट चन्द्रमाको उत्पत्ति भएको थियो । अपोलो अन्तरिक्ष यात्रीहरुले चन्द्रमाबाट जुन चट्टान ल्याएका थिए त्यो चन्द्र चट्टानमा पनि यही ‘थिया’ नामक तत्वको निशाना देखिन्छ ।
यो कुरा त धेरै पहिलादेखि नै मानिदै आएको हो कि चन्द्रमा खगोलीय टक्करको परिणामस्वरुपम उत्पन्न भएको हो । यद्यपि यस्तो कुनै टक्कर भएकै थिएन भन्ने कुरा पनि चर्चामा नल्याइएको भने होइन । तर १९८० देखिपछि यो टक्करको सिद्धान्तलाई प्रायःजसो सबैले स्वीकार गर्दै आएका हुन् । हाम्रो पूर्वीय परम्परामा पृथ्वीलाई आमा र चन्द्रमालाई मामा मान्ने प्रचलन छ । त्यसैले एक सर्ब साधारणको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने आमा कत्ति बृद्ध छिन भन्ने कुराले खाशै फरक पर्दैन । हामीलाई त केवल उनको आँचलको न्यानो माया र छाँया चाहिएको छ, बस ।
अनि यस कुराले कि मामा कति बर्षका भए, खाशै फरक पार्ने कुरा पनि भएन, जति बर्षको भए पनि मामा त मामै रहने हुन् नि ! यसको अर्थ हो कि उनको पनि हामीलाई लाडप्यार चाहिन्छ । यी मामाका बारेमा एउटा लोक गीतमा भनिएको छ कि ‘सुनको कटौरामा दूध भात लिइ आउनु’ । भाञ्जा भाञ्जीलाई त यही सुनको कटौराको दूधसँग मतलब हो। मामा बुढो भएर सेतै कपाल फुलिसकेका किन नहुन् । हामीले वास्तवमा चन्द्रमाको जिम्मामा अन्य कतिपय काम पनि दिइराखेका छौ । प्रेमीले आफ्नी प्रमिकाको ठेगाना पनि चन्द्रमालाई सोध्ने गरेका छन् कतिपय बेलामा त आफ्नो सन्देश चन्द्रमा मार्पmत नै प्रेमिकालाई पठाउने आग्रह पनि गर्ने गरेका छन् । यस कुरामा मामाको उमेर कुनै बाधक पनि छैन नै ।
कोरोना संक्रमितको संख्या दुई लाख १८ हजार नाघ्यो मृतक, १३०५
प्रात: उदाउँदो सूयलाई अर्घ्य दिदै सम्पन्न गरियो छठ पर्ब
जवान युवतीसँग जब कालिदासले पानी मागे !
न्हूदँया ११४१ भिन्तुना !